Awudingi idigri kwi nezesikhumba, ukuqonda: ukulala ne ukwakheka - kuwumqondo ezimbi. Kuyinto yingozi isikhumba esibi ngobe ilineni embhedeni. Yebo, uma ufika ekhaya nge ukukhathala ukucabanga kanye akuyona inkinga. Empeleni, konke okuningi sokukhaphela sasisibi ngaphezu kubonakala. Thola ukuthi kwenzekani ubuso bakho uma ulale nge makeup.
ikhule ezimbotsheni baba avimbekile
Uma ukulala makeup ebusweni bakho, wena ona izimbobo zesikhumba. Imikhiqizo eminingi yezimonyo aqukethe abicah, ekuvimbeni ikhule ezimbotsheni. Uma avimbekile, isikhumba kuba anolaka. Abantu ne ukuthambekela induna ukuvuvukala kungenzeka.
Isikhumba Akupheli ukusebenza. Njengoba izibilini, njalo isebenza. Nge isikhumba eside secrete umjuluko futhi begcoba. Uma isicelo makeup, uvimbela laba izinqubo. Ngenxa yalokho, lonke ebusuku isikhumba akakwazi kahle, futhi ungase ukuthuthukisa induna.
Wena ilimaze amaseli isikhumba
Skin amaseli nanenkinga uma ulala nge izimonyo ebusweni bakhe. Makeup zinganqwabelana ezingcolisa kusukela imvelo okuyinto zibulale amaseli kwesikhumba futhi abhubhise i-collagen, okuholela ukushwabana kwesikhumba ngaphambi kwesikhathi.
Isikhumba sakho siba buthuntu
Ekhazimulayo futhi abushelelezi isikhumba - isici wamukelekile. Buthuntu futhi grey - akukho. Uma usebenzisa izimonyo ukudala kukhanya kuhle lokho, kodwa ukuyishiya ngobuso bakho ebusuku, wena sifinyelele nomphumela ohlukile. Isikhumba - isitho elikhulu umzimba, ekuqhubeni imisebenzi ebalulekile. Kubalulekile ukuhlanza futhi exfoliate njalo.
Wena ahlukaniswe inqubo yokutakula
umzimba wethu uyalulama, ngenkathi silele. Lokhu kusebenza futhi isikhumba. Kubalulekile ukususa ukwakheka, ezimbotsheni ingasebenza evamile. Uma ushiya izimonyo, umphumela ingaba mibi kakhulu.
Wena konakalisa ukubukeka kwakho
Njengoba sekuphawuliwe, isikhumba regenerates ebusuku. Uma ushiya i makeup ebusuku, ngosuku olulandelayo uyobheka sibi kakhulu. Uma izimbobo zesikhumba kuvinjiwe, isikhumba akusho ukuphefumula, bese kuba khona izinkinga ezihlukahlukene ngokubukeka.
Wena esheshisa inqubo yokuguga
kwamaphutha inhlanzeko ingaba umuntu asheshe aguge. Isikhumba sakho siba ezomile, obomvu kanye nokuzwelana, ngenxa yalokho avele imibimbi ekuseni. It ahlahlele kuyi-collagen. I kaningi wenza lokhu, ngokushesha lo isikhumba bome, kanye imibimbi ekhona abe evelele.
Isikhumba sakho esomile
Ngisho noma ugeza ekuseni, bheka, isikhumba bangaba elomile anolaka emva ebusuku nge izimonyo ebusweni bakhe. Kubalulekile ukuhlanza ebusweni ngaphambi sokulala, bese ukusebenzisa imikhiqizo amafutha ekhuthaza izinqubo zokutakula. Isikhumba esomile sintula kuyaqina, ukuze imibimbi ijulile kakhulu.
Isikhumba sakho ithoni iba engalingani
Ngaphezu ukuguga, ukungabi ukunakekelwa evamile ungenza evelele engalingani isikhumba tone. Isikhumba is awabuyiswanga ebusuku, ngakho ngeke bakwazi ukubhekana nale lesikhumba. Inkinga iba lubonakale.
Cell yokutakula ukuthi kwenzeka ngesikhathi sokulala, akunakwenzeka, uma ebusweni izimonyo. Ngenxa yalokho, amangqamuzana nje angeke ivuselelwe. Khumbula ukuthi isikhumba - iyona umzimba, izimonyo - kuyinto ikhemikhali lokho kuyingozi lokhu umzimba.
Amehlo akho acasuke
Ukuvuvukala futhi ukuluma kwamehlo kungadalwa ubuthongo makeup. Eye makeup kufanele ahlanze njalo ebusuku. Eyelashes ukuvikela amehlo kusuka uthuli nempova. Uma ungenalo geza, izivikeli mzimba icushiwe ukulwa kungenzeka igciwane. Ngenxa yalokho, amehlo akhe ebomvu futhi ucasukile.
Eyelashes kungaba ngiwunqamule
Omunye yi engakhi elele ngamehlo Ngesineke - nemivimbo engu ziyaqothuka. Uma uyinki kusala eyelashes ebusuku bangagqashula phansi bese uba mfushane. Qiniseka ukususa ukwakheka ngaphambi kokulala.
Ungakwazi ukuthuthukisa ibhali
Uma ukulala nge Mascara on the eyelashes, ziba ziyaqothuka, ngaphezu kwalokho, lapho follicle izinwele avimbelwe, elibangela ibhali. Cishe akunakwenzeka ukuthi bafisa miphumela!
Ungase ube eczema ku Isivalo
Eczema - lokhu kuyinkinga isikhumba ezivamile ezingathinta ngisho Isivalo. Uma ungenalo ukususa ukwakheka kanye ubuthongo izithunzi, Mascara noma ezambiwa, ungakwazi avele dermatitis. Konke lokhu kungabangela ukuqubuka, pruritus, ukuzwa ukushisa.
Ungakwazi bhala cornea
Uma ungenalo ukususa iso makeup, Mascara ku-bacterium kungaba buthelela. eyelashes ziyaqothuka angase awele iso ngizinwaya ezindaweni zawo, okuyinto sina sibe sibi isimo sakho. Khumbula begeza ngaphambi kokulala.
Uthola ezingcolile embhedeni wakhe
Uma uya nge izimonyo ebusweni bakhe embhedeni, uyoba babhebhethekisa inkinga. Uthola ezingcolile embhedeni izimonyo, ekudaleni umbuthano esinolaka: ngisho nalapho uyokugezela, uzoba angalali iminonjana ukwakheka kusuka ngesikhathi agcine ngaso ukuvakashela. Uma uyikha phezulu le lendwangu ngeke ukuzalela amagciwane.
Une izindebe chapped
Imifantu izindebe - kuba buhlungu futhi singathandeki. Ngaphezu kwalokho, phezu ezifana kunzima ngokulinganayo ukusebenzisa lipstick. Uma ukuzumeka nge lipstick phezu izindebe, isikhumba uzolahlekelwa umswakama kanye inqamuke.
Ungakhohlwa mayelana nsuku zonke
Mode ibaluleke kakhulu isikhumba enempilo. Namathela isheduli, futhi ungalokothi ngiyolala makeup ngobuso. Geza kabili ukuze ahlanze kahle isikhumba wonke amanyela zanqwabelana.
Mascara "L'Oreal» Ivolumu Million Lashes Couture SO: Izibuyekezo